Chọpụta obere obodo Masca na Tenerife | Akụkọ Njem
La Agwaetiti Tenerife, nke di na Canary Islands Ọ bụ otu n'ime ndị kasị njem nleta na ya na anyị nwere ike ịhụ dị iche iche ebe nke mmasị. Agbanyeghi na oke osimiri ya bu otu n’ime ihe na-adọrọ adọrọ, ma oburu na anyi gaa agwaetiti a, anyi aghaghi ihie ohere iji banye n’ime uzo di iche iche di egwu dika ogige ndi ozo. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ ezigbo mmụọ mmụọ iji njem gaa mpaghara Masca na Tenerife.
La Mpaghara Masca bụ ụlọ ugbo nke dị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, n'ime ogige ntụrụndụ nke Teno. O nwere otutu obodo di iche iche ma nwekwaa onodu ebe ndi ozo di iche iche, dika ndagwurugwu na ugwu di iche iche nke na-eleghara oke osimiri anya, nke mere na o bu ebe njem nleta nye otutu ndi mmadu na-acho ihe di n’agwaetiti karia oke osimiri.
1 Choputa Masca na Tenerife
2 Otu esi aga Masca
3 Obodo Masca
4 Routezọ njem na Masca
Choputa Masca na Tenerife
Masca bụ nnukwu ụlọ nke bụ akụkụ nke obodo nke Buenavista del Norte, nke dị na Santa Cruz de Tenerife, na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ. Thelọ ugbo taa bụ Saịtị nke Mmasị Omenala yana uru Ọdịbendị Mere Eme, nke mere na ọ karịrị ụzọ njem njem. Ọ bụ maka kilomita iri na otu site na etiti obodo mepere emepe nke Buenavista del Norte na mpaghara dị elu, na Teno Massif n'ime Teno Rural Park. Massif bụ otu n’ime ụzọ atọ ewu siri wee mee agwaetiti Tenerife. Ka ọ dị ugbu a, o nwere ugwu na ndagwurugwu ndị na-eduga na Cliffs ndị a ma ama nke ndị Refeyim, ndị niile maara na-eleta agwaetiti a maara nke ọma, ebe ọ bụ na ha ga-ahụrịrị otu ha si maa mma. Ihe nwere ike ịbụ na ị maghị bụ na ọ bụrụ na ị gbadaa n’ụwa ị ga-ahụ onwe gị na mpaghara a, nke nwere obere obodo na ụzọ ụkwụ na-atọ ụtọ.
Na nke a ime obodo ogige basalt formations pụrụ ịchọta nke dị oke mkpa. Enwekwara oke ohia di iche iche na oke ohia laurel nke a puru ihu na mpaghara Macaronesia nke gunyere agwaetiti Atlantic ndi ozo dika Madeira ma obu Cape Verde. Ọ bụ ụdị oke ohia nke mmiri ozuzo nke a na-ahụ naanị n'akụkụ ụfọdụ nke agwaetiti ndị a. Achọpụtakwala ihe ndị mgbe ochie nke ndị Guanche, ndị aborigine nke agwaetiti, nke na-egosi na ọ bụrịrị mpaghara dị mkpa ọtụtụ narị afọ gara aga.
Otu esi aga Masca
Ime ụzọ Masca ọ ga-ekwe omume mee ya na ụlọ ọrụ dị iche iche na-eme njem mmụta. Somefọdụ na-eme njem ahụ site na moto jiipu ma ọ bụ ụgbọ ala ndị ọzọ yana ọ ga-ekwe omume iji ụgbọ ala mgbazinye ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ihe ọzọ nwere ike ime bụ ịkwọ ụgbọala n’obodo Los Gigantes, bụ́ ebe a na-eme ọtụtụ ụgbọ mmiri iji hụ ndị nnụnụ ma rute n’akụkụ osimiri nke ọnụ ọnụ ugwu Masca. Zọ ahụ si n’oké osimiri na-aga n’obodo nta bụ Masca, ruo n’obodo nta ahụ, n’okporo ụzọ dị ogologo nke na-ewe ihe dị ka awa atọ na awa anọ n’etiti ugwu.
Anyi wee rute na nke a obere obodo n'ugwu anyi aghaghi iji ya n'okporo uzo nwere ọtụtụ akụkụ, dịka ha na-ahụkarị mpaghara a. N'ime obodo ị nwere ike ịhụ nkwụ nkwụ na ndagwurugwu, nwere obere ụlọ na-egosi anyị ụdị usoro agwaetiti ndị a, nwere mgbidi na osisi. Obodo a bụ ebe echefuru echefu ebe a na-ekwu na ndị ohi na-ezo n'ihi ọdịdị ala ya. Ọ bụ obodo dị jụụ ebe enweghị ihe ọ bụla ị ga-ahụ, belụsọ ụdị ụlọ ya na ebe ị ga-ese foto mara mma. Ọ bụ mmalite nke njem njem iji rute n'ụsọ osimiri, yabụ n'oge a ọ dị mfe maka ịnwe otu mmegharị nke ndị njem na mpaghara a, ebe ọ bụ na ọ bụ njem ole na ole na-eduzi.
Routezọ njem na Masca
Enwere ike ime ụzọ ụkwụ njem n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụrụ na anyị emee azụ na-aga ọ ga-ewe ihe dịka awa isii, yabụ anyị ga-ewe oge ma bụrụkwa nke a kpụrụ n’ọnọdụ. N’aka nke ọzọ, anyị nwere ike isi n’ụsọ osimiri pụọ ma ọ bụrụ na anyị ga-eji ụgbọ mmiri gaa obodo nta ma ọ bụ hapụ obere obodo chee ihu osimiri. Maka ụdị ụzọ a, anyị ga-enwe ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ ala mgbazinye na-echere. Ọ na-agbada site na obodo na-agafe site na Chọọchị nke Mmasị N'ọnọdụ nke Morro Catana. Mgbe ị rutere ebe ahụ, e nwere ụzọ akara aka ekpe na aka ekpe. Zọ ahụ na-aga n'ihu site na ugbo ochie na site na mpaghara na ahịhịa ala. Anyị ga-aga n'ihu na-agagharị site na ndagwurugwu ahụ ruo mgbe anyị rutere n'ụsọ osimiri Masca, ebe ụgbọ mmiri na-echekarị ịlaghachi n'oké osimiri na Los Gigantes, na-enwe ọhụụ nke ọnụ ọnụ ugwu na ụlọ ọrụ dolphins n'ọtụtụ oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Masca, Tenerife
Omenala na ọdịnala ndị Masai